Ama-Movie Kuhle Okufakiwe Izitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Ama-Movie Kuhle Okufakiwe Izitimela
Yini ugqozi ukuthi uthathe uhambo isitimela ezingaphezu kuka ukubukela i-Movie okuthakazelisayo Okufakiwe Izitimela? Sibheke ohlwini lwethu Ama-movie engcono Okufakiwe Izitimela, futhi Tweet nathi nganoma @saveatrain bese usitshele ukuthi imiphi enikubonile uma ubathandile njengoba okuningi njengoba senzile.
Esiqongolweni Pick kwethu Ama-movie Okufakiwe Izitimela kuyinto – Harry Potter Ama-movie 1 ukuze 8 (2001-2011)
Ngokusekelwe uchungechunge odumile amabhuku ngu J.K. Rowling, la Ama-movie eziyisishiyagalombili Okufakiwe Izitimela iveza fantasy imilingo mayelana wizadi abasha, u-Harry Potter. Akufundayo anazo omlingo, oyayo Hogwarts School of Ubuthakathi futhi wizardry, lapho yena shí impilo entsha zigcwale ngobuningi izinselelo, amashinga, kanye nokunqoba.
Kodwa lapho enza izitimela beze? Ngosuku Harry lokuqala esikoleni, anakho ukuba bagibele Hogwarts Express, isitimela esisogwini platform 9 ⅓. Kuyinto kuphela kufinyeleleke by egijima – okusheshayo- ekufezeni odongeni lwezitini phakathi ezisekelweni 9 futhi 10. Uma ababegibele isitimela, uhlangana Ron Weasley futhi Hermione Granger, ngubani bagcina abangane bakhe impilo.
Kuyo yonke movie, isitimela Hogwarts Express uyaqhubeka ebonisa isiqalo nesiphetho unyaka ngamunye wesikole futhi inikeza canvas kwabanye kuhle umbukwane indaba-imigqa. Ikakhulukazi sikhathi Harry noRon ngaphuthelwa ngesitimela futhi sayibona impukane imoto Enchanted esikoleni!
Qiniseka ukuthi ulande okungenani eyodwa yalezi Ama-movie Okufakiwe Izitimela wakho ifoni noma ithebhulethi ngaphambi ukubhuka yakho elandelayo uhambo ngesitimela.
I-Rotterdam iya eLondon ngezitimela
I Darjeeling Limited (2007)
Okuthunyelwe okwabiwe nguSinefil (@ city.of.cinema)
Ongajwayelekile inhliziyo, kulokhu kukhetha of, Ama-Movie Okufakiwe Izitimela, inawo wonke kuyizimpawu yayo-umqondisi umbhali, Wes Anderson. Ngemva ubaba wabo ihlangabezana i ukufa ngengozi, bazalwane abathathu ahamba India ngesitimela ngomzamo ukuba babe nobuhlobo obuseduze.
Idlalwa ngu Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman, kwadingeka ukuba umzalwane ngamunye is ohlushwa ukucindezeleka ngokomzwelo, futhi eziningi ahlale ethukuthele futhi kuvelaphi ukulwa kuzokonakala. Kodwa-ke, ekubeni i-movie Wes Anderson – ziningi esonta kwamahlaya kanye ematfuba. Omunye wabafowethu umshiye ukhulelwe unkosikazi ekhaya kanti omunye uhlukene nentombi yakhe futhi uthola ezothando nomunye wabasebenza esitimeleni.
Kukhona inyoka enobuthi akuzange, emngcwabeni, ukuzindla futhi ... kahle, ngeke ukunikeza noma yimuphi ngaphezulu kude. Vumela lesi sigaba sakudala sikukhuthaze ukuba u-ode okwakho isitimela adventure.
ENuremberg ukuya eBerlin ngezitimela
I-Aachen eya eBerlin ngezitimela
IHamburg iye eBerlin ngezitimela
Murder phezu Orient Express (2017)
Okuthunyelwe okwabiwe nguSteve (@grushkov)
Ngokusekelwe abadumile Agatha Christie inoveli, lokhu Remake yesimanje has a yokusakaza star-igcwele kuhlanganise Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, UJohnny depp, kanye noWillem Dafoe. Kenneth Branagh kuyinto indima ukuhola Hercule Poirot, futhi ayebuye ifilimu futhi lokhu kuyingxenye Ama-movie yethu Okufakiwe Izitimela.
Ngaphandle nje kokuthi isingeniso esithile engqondweni, yonke indaba isethwe phezu isitimela elibizayo. Poirot amabhodi aseMpumalanga Express ukuthatha iholidi eside hola. Kubha yokunethezeka esezingeni lokuqala futhi imoto yokudlela, uhlangana neqembu labagibeli ababonakala bengahlobene. Omunye wabo uthi ngokuphila kwakhe usengozini futhi uzama ukuthola Poirot – umphenyi ohlonishwa – ukuze agcine kuye ephephile.
yena enqaba, futhi bonke abagibeli ulale. Ngakusasa ekuseni, umgibeli utholakale ebulewe. Ukuze wenze izinto eziningi okukhulu, the derails sitimela iqhwa. Poirot is waqoqa ukuxazulula ubugebengu ngaphambi isitimela emuva track futhi amaphoyisa bati ukubulala.
Ngo kahle watshela, imfihlakalo okukhulu Thriller, indaba iqhubeka njengoba Poirot izingxoxo umgibeli ngamunye futhi uthola ukuthi ngamunye wabo imfihlo futhi akubona bonke Kunjengoba kubonakala.
Lena okumele abonwe phakathi, Ama-Movie Okufakiwe Izitimela, hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa lwendaba ekhaliphile unqambothi oyibamba kodwa futhi kwenkundla langa nemibono isitimela uqobo.
Bonn to Amsterdam ngezitimela
I-Paris to Amsterdam ngezitimela
The Little Engine Ezingasiphuca (2011)
Uma une bamazwe kancane ukuhamba nawe, get kubo ngesasa ngoba lolu hambo nale ifilimu icwecwe. tale Izingane zakudala sika kuza ekuphileni movie yobude obugcwele nge yabalingisi star-igcwele. Osaziwayo efakiwe zihlanganisa Jamie Lee Curtis futhi Whoopi Goldberg.
I-movie lulandela Engine Little – isitimela ithoyizi – kulo lonke uhambo yakhe Dreamland, njengoba yena baxhumana nezinye izinhlamvu isitimela namathoyizi. Kukhona lwendaba parallel emhlabeni wangempela, lapho protagonist umfanyana okuthiwa Richard. Nokho, lezi emihlabeni emibili nqwamana lapho Richard ugcina ngaphakathi Dreamland. ebukhoneni Bakhe lapho kubangela izinkinga, so he needs to go back. Adventure and hijinks ensue while he and the toys try to get him back into the real world.
Yeka indlela enhle yokukhuthazwa ngama-movie afaka izitimela ukuhamba ngezitimela!
IBrussels iya eParis ngezitimela
ILondon ukuya eParis ngezitimela
UMarseille uya eParis ngezitimela
Amsterdam to Paris ngezitimela
Ready ukubhala ama-movie akho Okufakiwe indaba ehlobene Izitimela? Vakashela www.saveatrain.com bese athenge amathikithi esitimela ngemali eshibhe olulandelayo isitimela adventure yakho.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-movies-featuring-trains%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / ru ukuba / es noma / de futhi ngezilimi ezingaphezu.
#U-Harry Potter trainmovies amathiphu isitimela